घरमै यसरी बढाउनुस् सेक्स पावर ! « Mero LifeStyle
मेरो लाइफस्टाइल	|| 23 June, 2021
यौन शक्ति कसरी बढाउने ? यो प्रश्न अधिकांशको हुने गर्छ । तर कतिपयलाई यसको बारेमा जानकारी नै हुँदैन । घरमै पनि विभिन्न घरेलु उपाय अपनाएर आफ्नो सेक्स पावर बढाउन सकिन्छ । यदि तपाई आफ्नो यौन शक्तिमा आएको कमीलाई घरेलु उपायले बढाउन चाहनुहुन्छ भने यी टिप्स तपाईका लागि अति आवश्यक छन् ।
— लसुन यौन शक्ति बढाउन र यौन दुर्बलता हटाउन धेरै उपयोगी मानिन्छ । लसुनको दुई–तीन पोटी दैनिक खानाले यौन शक्ति बढाउँदछ ।
— प्याजले पनि यौन शक्ति बढाउछ , विशेष गरी सेतो प्याजले सेक्स पावर बढाउन धेरै मद्दत पु¥याउँछ । जोसँग यौनसँग सम्बन्धित कुनै कमजोरी छ, तिनीहरूले प्याज खानुपर्दछ । मिलि ६ प्याजको रस, ३ ग्राम घ्यू र २ चम्चा मह एकसाथ मिसाउनुहोस् र दूधसँग मिसायर पिउनुहोस् । २/३ महिना यसको प्रयोग गर्दा यौन शक्ति बढ्छ ।
— दिनको दुई पटक जामुन खानु पनि धेरै लाभदायक हुन्छ । यसले पनि तपाईको शरीरमा कमी भएको यौन शक्तिलाई बढाउन मद्दत गर्दछ ।
— २०० मिली गाईको दूधमा एक चम्चा मह मिसाएर खाएमा पनि विर्यको कमी हुँदैन ।
— १ कप दूधमा १५ ग्राम सेतो मुसलीको जरा उमालेर दिनमा दुई पटक खानुहोस् । यसको नियमित सेवनले नपुंसकता र शीघ्रपतनको समस्याबा मुक्त भइन्छ ।
पहिलो शारीरिक सम्बन्ध कुन उमेर समूहमा धेरै हुन्छ ? « Mero LifeStyle
[…] घरमै यसरी बढाउनुस् सेक्स पावर !सेक्सबारे केही रोचक तथ्य !सेक्सका लागि सबैभन्दा राम्रो र नराम्रो समय कुन हो र किन ?पुरुषलाई घायल बनाउने महिलाका यी ५ गुणसेक्सले महिलाको सौन्दर्यता यसरी बढाउँछपहिलो यौनसम्पर्कपछि महिलामा देखिन्छन् यस्ता शारीरिक समस्यायी ६ तरीकाले यौन सम्बन्धलाई सहज बनाउनुस्सेक्ससँग जोडीएको १० रोचक तथ्यके शारीरिक सम्बन्धबाट कोरोना सर्छ ?पुरुष प्रेग्नेन्ट हुँदा देखिन्छन् यस्ता लक्षणमहिलाले पुरुषसँग बिस्तारामा के चाहन्छन् !यस कारण महिलाको यौनेच्छामा कमी आउँछ !कस्ता मानिसको सेक्स लाइफ उत्कृष्ट हुन्छ ?महिलाले सबैभन्दा धेरै पुरुषको के मन पराउँछन् ?सेक्सअघि खान नहुने ५ कुरा […]
सेक्सअघि खान नहुने ५ कुरा « Mero LifeStyle